China Gallic Acid (iBanga loShishino) uMvelisi kunye noMboneleli |Sanjiang
Igama lemveliso:I-asidi ye-gallic (ibakala lamashishini)
Igama lemveliso: I-asidi ye-gallic (ibakala lamashishini)
Umgangathoindex:Imveliso ihambelana nemigangatho yaseYurophu (inqanaba lokuqala), imigangatho ye-JIS yelizwe laseJapan (inqanaba lokuqala), i-US Pharmacopoeia 27th edition, kunye neemveliso eziphezulu.
Ukusetyenziswa / iindlela zokusetyenziswa:Le mveliso isetyenziswa kakhulu kumachiza, idayi, iikhemikhali kunye namashishini e-organic synthesis, kunye nokuhlalutya isinyithi esinqabileyo.
Ugcino:Ubungqina bokufuma, ukukhanya-ubungqina, ukugcinwa okuvaliweyo
Ngokwesiseko soHlobo, imakethi yeGallic Acid yahlulwe yangakwibakala le-Pharma, iBanga lokutya, iBanga loShishino, iBanga le-elektroniki.I-Pharma Grade iyongamela iGallic Acid yehlabathi ngenxa yokusetyenziswa kweGallic Acid njengomgangatho wokumisela umxholo wephenolic wohlalutyo kwiimveliso zamayeza.Ngaphezu koko, njenge-antioxidant, i-Gallic acid inokukhusela umzimba kwi-radicals yamahhala kunye nomonakalo we-oxidative kunye neempawu ezichasayo ze-Gallic acid ziyenza ibe luncedo ngakumbi kuba izigulo ezininzi zempilo zivela ngenxa yokuvuvukala. ngokuchasene ne-allergies.
1. Isetyenziswe njenge-astringent kunye ne-hemostatic agent yangaphakathi kwinkqubo ye-urinary kumayeza.
2. Isetyenziselwa ukwenza i-inki eblue yokubhala esisigxina.
3. Isetyenziswe njengoncedo lokusebenza kwi-stencil yoshicilelo kunye ne-lithographic printing.
4. Le mveliso isetyenziswa njengoncedo lophuhliso lweefoto.
5. Le mveliso ingasetyenziselwa isisombululo se-silver halide ekufotweni ukufumana ukuzinza kwexesha elide kunye nokuphelisa ingxaki engacacanga kwizinto ezimbi.
6. Le mveliso i-agent edibeneyo ye-cyanoacrylate adhesives.
7. Isetyenziselwa ukwenza ulusu kunye namalungiselelo okudaya iinwele.
8. Le mveliso isetyenziswe njenge-colloidal stabilizer kwimveliso ye-siding.
9. Le mveliso isetyenziswe njenge-mordant kwimveliso yephepha elinemibala kunye ne-fiberboard enemibala.
10. Ukongeza i-0.01-0.04% ngobunzima be-asidi ye-sesquitic kwi-gypsum-based building grid formula inokunyusa amandla ayo.
11. Isetyenziswe njenge-reagent analytical for alkaloids, metals and inorganic acids.
600T / Y
Ngaphambili: I-Gallic Acid (iBakala lombane)
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu waseTshayina weGallic Acid CAS 149-91-7